I-China N, N-dimethylbenzylamine abavelisi kunye nabathengisi | Ngokunyaniseka
Igama: N, N, N ', N'-Tetramethylethylenediamine
Izithethantonye: TMEDA / TEMED, BIS (DIMETHYLAMINO) ETHANE, 1,2-
Ifomula yeMolekyuli: C6H16N2
Ubunzima beMolekyuli: 116.21
Inombolo ye-CAS: 110-18-9
Inombolo ye-UN.: 2372
Isikhuseli se-TMEDA sisixhobo semibala ephezulu esinebala elingenambala. Izinto eziphathekayo zinevumba le-amine. Iyanyibilika ngokulula emanzini, i-ethyl alcohol, kunye nezinye izinyibilikisi zendalo.
Isetyenziswa njengophakathi kwindibaniselwano yezinto eziphilayo. Ikwasetyenziswa njengesixhobo sokunqamla umnqamlezo we-polyurethane foam rigid. Isiqinisi simahla esisetyenziswe njengesixhobo sokuncedisa nge-APS ukukhuthaza ukupolishwa kweeyile ze-acrylamide
Iphakheji kunye nokuGcina: 160kg / igubu. Ivalwe ngci kuthintelwa ekuvuzeni nasekuchukumiseni amanzi. Igcinwe kwindawo epholileyo, evulekileyo neyomileyo, kude nomlilo kunye nobushushu.
Imbali ende kunye nemveliso ezinzileyo
Ngoku amandla ethu emveliso aya kuba nakho ukufikelela kwi-2000MT ngonyaka, sinokucwangcisa ukuthunyelwa kuwe ngexesha.
Inkqubo yolawulo lomgangatho olungqongqo
Sinenkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho, bonke oochwephesha bethu banobuchule, ngokungqongqo kulawulo lomgangatho.
Ngaphambi komyalelo, sinokuthumela isampuli kuvavanyo lwakho. Siyaqinisekisa ukuba umgangatho uyafana nobungakanani besambuku.I-SGS okanye elinye iqela lesithathu lamkelekile.
2. Ukuhanjiswa ngokukhawuleza
Sinentsebenziswano elungileyo nabathumeli abaninzi abaziingcali apha; singathumela imveliso kuwe wakube uqinisekisile iodolo.
3. Ixesha elingcono lokuhlawula
Sinokwenza iindlela zokuhlawula ezifanelekileyo ngokweemeko ezahlukeneyo zabathengi. Amagama amaninzi okuhlawula anokubonelelwa
• Yenza iikhemikhali ebomini. Sinamava angaphezu kweminyaka eli-19 kumaShishini oMichiza kunye norhwebo.
• Iingcali kunye neqela lobuchwephesha ukuqinisekisa umgangatho. Naziphi na iingxaki ezisemgangathweni zeemveliso ezinokutshintshwa okanye zibuyiselwe.
Ulwazi olunzulu ngekhemistri kunye namava okubonelela ngeenkonzo zomgangatho ophezulu weekhompawundi.
• Ulawulo lomgangatho olungqongqo. Phambi kokuba zithunyelwe, sinokunikezela ngesampulu yasimahla kuvavanyo.
Izinto ezenziwe ngezinto ezingafunekiyo eziphambili, ke ixabiso linokukhuphisana.
Ukuthunyelwa okukhawulezileyo ngomgca wokuhambisa owaziwayo, Ukupakisha ipallet njengesicelo esikhethekileyo somthengi. Iifoto zemithwalo zinikezelwe ngaphambi nasemva kokulayisha kwizikhongozelo kubathengi.
• Ukulayisha ngobungcali Sineqela elinye lokongamela ukulayishwa kwemathiriyeli. Siza kujonga isikhongozeli, iipakeji ngaphambi kokulayisha.
Kwaye iya kwenza iNgxelo yokuLayisha epheleleyo kumthengi wethu kuthumelo ngalunye.
• Inkonzo ebalaseleyo emva kokuthunyelwa nge-imeyile kunye nomnxeba.
Egqithileyo 1,2-diaminobenzene CAS: 95-54-5
Umgangatho ophezulu weMethylmorpholine eneXabiso eliPhambili